Kuunza mota kubva kuGerman kuenda kuUK | Yangu Mota Kunze
Kuunza mota yako kubva kuGerman kuenda kuUnited Kingdom
Yangu Mota Yekunze inopa musuwo kuenda kunyoresa kunyoresa sevhisi yekunyoresa mota kubva kuGerman
Yedu mota yekuGerman kupinza makotesheni akazara akabatanidzwa uye akavakirwa zvizere pane zvaunoda. Iwe unogona kuziva zvakawanda nezve maitiro ekupinza mota yako pane ino peji, asi usazeze kupinda mukutaurirana uye utaure nenhengo yevashandi.
KUSUTSA KUNYORWA KUSIMBA
Kana iwe uri kutsvaga kuendesa mota yako kuUnited Kingdom usazeze kuzadza fomu yekoteshini. Ndokumbira upe ruzivo rwakawanda nezve yako german mota sezvinobvira uye isu tichava nekutaurirana mumaawa makumi maviri nemana Get mazwi
Kuwana mota yako kubva kuGerman kuenda kuUnited Kingdom
Kutakura mota yako kubva kuGerman kuenda kuUnited Kingdom idanho rekutanga mukuita kwekutakura mota yako
Mota zhinji dzatinonyoresa kubva kuGerman dzatova muUnited Kingdom. Nekudaro, kana iwe uchida chekufambisa usazeze kutaura muchikumbiro chako chekutora kuti iwe unoda isu kuti titore mota. Dzese mota dzakazara inishuwarenzi panguva yekufamba kwavo kuenda kuUnited Kingdom uye isu tinochengeta zvese zvetsika zvekupinda mapepa uye kuronga zvese zvekutakura zvichiita nyore kuita kupinza mota yako.
Isu tinotora mota yako kuGerman kungave uchishandisa yakavharirwa kutakura kana mutakuri wemotokari. Inogona kuve mazuva mashoma mota yako isati yasvika muUnited Kingdom.
Tichaendesa mota yako zvakachengeteka muUnited Kingdom pasina chinorova uye tinopedzisa iyo NOVA pachinzvimbo chako.
Kana mota yako iri kuuya kunzvimbo yedu muCastle Donnington isu tinoburitsa zvakachengeteka uye nekuchengetedza mota yako yakagadzirira kurongerwa mukugadziriswa. Mune zvimwe zviitiko mota inogona kuenda yakanangana newe.
Ndokumbira utarise kuti paunenge uchikwanisa kutumira mota yako, nzira yemumugwagwa ndeimwe yenzira dzinokurumidza kwazvo dzekuendesa mota yako kuUnited Kingdom kubva kuGerman. Usazeze kupinda mukutaurirana nezve kutakurwa kwemotokari yako kubva kuGerman kana uine chero mibvunzo maererano nekutakurwa kwemotokari yako yeGerman kuenda kuUK.
Yakawanda sei mutero yauchazoda kubhadhara kupinza mota yako kubva kuGerman?
Dzese mota dzinopinda muUnited Kingdom idzo dziri kunyoreswa dzinofanirwa kubvisirwa mutero wavo zvisati zvaitika. Isu tinopa rubatsiro neyakaitika yese kutora kushushikana kunze kwemotokari yako kuendesa.
IHMRC inoda kuti iwe upedze NOVA yemotokari paunosvika muUnited Kingdom mukati memazuva gumi nemana kuratidza kuti hapana mutero unokodzera.
Nova kuzviisa pasi
Isu tichagadzirira kutumira iko pachinzvimbo chako zvichireva kuti hakuzove nechero nyaya kunyoresa mota yako gare gare.
Wakawanda sei mutero iwe waunofanirwa kubhadhara?
Paunenge uchipinza mota kubva kuGerman kuenda kuUK, unogona kuzviita zvachose mutero pasina kupa mota iri pamusoro pemwedzi mitanhatu uye yakafukidza pamusoro pe6km kubva nyowani.
Kune avo vane hanya neBrexit uye nemitero. Parizvino mota dziri kuunzwa kuUnited Kingdom dzichiri kufukidzwa neEU 'Yemahara Kufamba Kwezvinhu' panguva yekuchinja kusvika 31 Zvita 2020.
Yangu Mota Kunze inogona kubatsira mune ese maitiro ekugadzirisa yako german mota kuti iite zvinoenderana nekushandisa mukati meUnited Kingdom. Zvichienderana nezera remotokari yako nzira yekunyoreswa yakati siyanei, unogona kuziva zvakawanda nezve izvo zvinosanganisirwa pazasi:
Mota iri pasi pemakore gumi here?
Kune mota dziri pasi pemakore gumi, paunosvika kuUK, mota yako inofanirwa kutevedzera UK mhando yekubvumidzwa. Isu tinogona kuita izvi nemaitiro anonzi kubvumirana kana kuburikidza neIVA kuyedzwa.
Kuruboshwe ruoko kutyaira mota kubva kuGerman kunoda kumwe kugadziridzwa, kusanganisira izvo kune iyo yemwenje pateni yekudzivirira kupenya kweinouya traffic, iyo spidhi yekuratidzira mamaira neawa kuverenga uye neseri mhute mwenje kana isati yatowirirana pasi rese.
Iyo mota yapfuura makore gumi here?
Kune mota dzinopfuura makore gumi kubva kuGerman, mota zhinji uye zvekare ndezvemhando mvumo isingabvumirwe, asi zvichiri kuda MOT bvunzo uye kumwe kugadziridzwa kusati kwanyoreswa. Iko kunatsurudzwa kunoenderana nezera asi kazhinji kune iwo marambi epamberi uye kumashure kwechiedza mhute. Dzimwe nguva mota dzinobva kuGerman dzinodawo kuchinjiswa kune inomhanyisa mota kana ikasanyoresa mumamaira neawa.
Kana mota yako yatove muUnited Kingdom uye uri kutarisana nematambudziko nemaitiro ekunyoreswa isu tiri kunyanya kufara kubatsira kure kuresa kunyoresa mota yako yeGerman. Kune mota zhinji dzinopfuura makore gumi basa racho rinogona kuitwa negaraji rako remunharaunda kugadzirisa mota. Isu tobva tachengeta mapepa ese ari kure uye tinokutumira manhamba ako. Ndokumbira utarise kuti kana iwe uri mukati mekutyaira chinhambwe isu tiri vanopfuura vanofara kuronga zuva rimwe chete apo kudzoreredza kunogadziridza munzvimbo yedu muCastle Donington.
Iyo yakarongedzwa, iri nyore maitiro akave akagadzirirwa pamusoro pemakore mazhinji, kupinza mota kubva kuGerman kuenda kuUK hakugone kuve nyore. Kuti umhanye pane zvaunoda uye uwane zvimwe pamusoro pechipo chedu, taura nesu nhasi pa + 44 (0) 1332 81 0442.
Isu tinopa iyo yakazara yekusevhisa sevhisi yeGerman mota
MHANDO DZEMOTO DZEMAJEREMANI